Gudbiyaha Dijital ah iyo Soo -saareyaasha Taxanaha Dareemayaasha & Soo -saareyaasha - Shiinaha Wareegga Dijital ah iyo Warshadaha Taxanaha Dareemayaasha
Gudbiyaha Dijital ah iyo Taxanaha Dareemayaasha
Dareenka pH ee dhijitaalka ah
Sensor ORP Dijital ah
Dareenka Xulashada Dijital ah ee Dijital ah
Dareenka Dhaqdhaqaaqa Dijital ah
Dareeraha Dijital ah ee La Kala Diray
Sensor Chlorine Residual Digital ah
Dareemayaasha La -Joojiyay Dijital
Dareenka Dhibka Dijital ah
Falanqeeyaha Chlorophyll Dijital ah
Falanqeeyaha Algae ee Buluug-Cagaaran
Dareeraha COD ee Dijital ah
Ion gudbiye/Ion Sensor
Acid-base cusbinta gudbiyaha
Taxanaha Oksijiin ee la kala diray
Fluorescent Kala Dirtay Ogsijiin
Polarography Kala diray gudbiye ogsajiin
Mikroow Kala -diray Ogsajiin Ogsajiin ah
Dheecaannada la Hakiyay (Iskudarka Dhoobada)/Taxanaha Turbidity
Dareemayaasha la Hakiyay (Iskudhufka Dhoobada) gudbiye
Gudbiyaha Xawilaadda/Dareenka Xannibaadda
Taxanaha la socodka biyaha jeermi -dilaha
Gudbiyaha Chlorine ee hadhay
Chlorine Dioxide dioxide gudbiye
Gudbiyay Ozone Kala diri
Mitirka Heerka Dareeraha
Meter Interface Dhoobada
Dhaqanka & TDS & Resistivity & Salinity
Taxanaha Ion Taxanaha
Koloriin haraaga ah & Dioxide Koloriin ah & Ozone la kala diray
Turbidity & Taxanaha adag ee la Joojiyay
DHAMAAN QAYBAHA SOO SAARKA
CS6602D Sensor COD Dijital ah
Dareemaha COD waa dareeraha COD nuugista UV, oo ay weheliso khibrad dalab oo badan, oo ku saleysan asalka asalka ah ee dhowr casriyeyn, ma aha oo kaliya cabbirka ayaa ka yar, laakiin sidoo kale buraashka nadiifinta goonida ah ee asalka ah si loo sameeyo mid, si rakibidda ayaa aad ugu habboon, oo leh kalsooni sare.
CS6603D Sensor COD Dijital ah
CS6604D Sensor COD Dijital ah
Baaritaanka CS6604D COD wuxuu leeyahay UVC LED aad loogu kalsoon yahay oo loogu talagalay cabbiraadda nuugista iftiinka. Farsamadan la xaqiijiyay waxay bixisaa falanqayn lagu kalsoonaan karo oo sax ah oo wasakhaysan organic si loola socdo tayada biyaha qiime jaban iyo dayactir hoose. Iyada oo leh naqshad qallafsan, iyo magdhow isku -dhafan oo isku -dhafan, waa xal aad u fiican oo si joogto ah loola socdo biyaha isha, biyaha dushiisa, biyaha wasakhda ee dawladda hoose iyo warshadaha.
T6601 Falanqeeyaha Online COD
Kormeeraha COD -ka ee warshadaha waa kormeeraha tayada biyaha ee internetka iyo aaladda kontoroolka leh microprocessor. Qalabka waxaa lagu qalabeeyaa dareemayaasha UV COD. Kormeeraha COD ee tooska ah waa kormeere joogto ah oo caqli badan oo onlayn ah. Waxaa lagu qalabeyn karaa dareeraha UV si otomaatig ah loogu gaaro cabbir ballaaran oo ppm ama cabir mg/L ah. Waa aalad gaar ah oo lagu ogaanayo waxyaabaha ku jira COD ee dareeraha ku jira warshadaha la xiriira bullaacadaha la xiriira.
Falanqeeyaha Online Blue-Green Algae T6401
Falanqeeyaha Internetka Buluug-Cagaaran Algae Falanqeeyaha ayaa ah kormeere tayada biyaha iyo aaladda kontoroolka leh microprocessor. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa warshadaha korontada, warshadaha batroolka, elektiroonigga biraha, macdanta, warshadaha waraaqaha, warshadaha cuntada iyo cabitaanka, daaweynta biyaha ee ilaalinta deegaanka, dhaqashada biyaha iyo warshadaha kale. Qiimaha Algae-buluug-cagaaran iyo qiimaha heerkulka xalka biyaha ayaa si joogto ah loola socdaa loona kontoroolaa.
Falanqeeyaha Tooska ah ee Chlorophyll T6400
Falanqeeyaha Warshadaha ee Chlorophyll Online waa kormeere tayada biyaha iyo aaladda kontoroolka leh microprocessor. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa warshadaha korontada, warshadaha batroolka, elektiroonigga biraha, macdanta, warshadaha waraaqaha, warshadaha cuntada iyo cabitaanka, daaweynta biyaha ee ilaalinta deegaanka, dhaqashada biyaha iyo warshadaha kale. Qiimaha Chlorophyll iyo qiimaha heerkulka ee xalka biyaha ayaa si joogto ah loola socdaa loona kontoroolaa.
Dareenka Dhaqdhaqaaqa CS3742D
Waxaa loogu talagalay in lagu nadiifiyo, biyaha Quudiyaha kuleeliyaha, Warshadda Korontada, Biyaha isku -dhafan.
Way fududahay in lagu xidho PLC, DCS, kombiyuutarada kontaroolka warshadaha, ilaaliyayaasha ujeeddada guud, qalabka wax lagu duubo ee bilaa warqadda ah ama shaashadaha taabashada iyo aaladaha kale ee saddexaad.
Sensor -khalkhalka Dijital ah oo leh Nadiifin Toos ah
Mabda'a dareeraha murugadu wuxuu ku salaysan yahay nuugista infrared -ka oo la isku daray iyo habka iftiinka ee kala firdhay. Habka ISO7027 waxaa loo adeegsan karaa si joogto ah oo sax ah loo go'aamiyo qiimaha murugada. Marka loo eego ISO7027 tikniyoolajiyadda iftiinka laba-firdhiye ee infrared ma saamayso chromaticity si loo go'aamiyo qiimaha fiirinta wasakhda. Shaqada is-nadiifinta waxaa lagu xulan karaa hadba jawiga isticmaalka. Xog sugan, waxqabad lagu kalsoonaan karo; shaqeynta is-ogaanshaha la dhisay si loo hubiyo xog sax ah; rakibidda iyo hagaajinta fudud.
CS7800D Dareemayaasha Xad -gudubka onlaynka ah
CS7920D Dareeraha Qulqulka Dhex-dhexaadiyaha
Dareenka Nooca Immersion Online
Cinwaanka Dhismaha 6, No.166 Mindong Road, Pudong New District, Shanghai, China 201209
Taleefan +86 21 61621082
Electrode Sensor Ph, Dareeraha Dahaarka Titanium Alloy, Dareenka Chlorophyll, Xaqiijinta Biyo -La'aanta Awoodda Dareeraha Dareemayaasha, Tayada Biyaha ee Kormeeraha Khadka, Dareeraha Dhaqdhaqaaqa Garaafad ee Quadrupole,